Samee 5-Tan Qodob Hadaad Rabto Inaad Noqoto Ganacsade Guulaysta | Hawraar
Samee 5-Tan Qodob Hadaad Rabto Inaad Noqoto Ganacsade Guulaysta
Soomaalida waxaa lagu amaanaa in ay yihiin dad ganacsiga ku wanaagsan waloow aysan inta badan lahayn waxbarasho ganacsi ama waayo aragnimo caalami ah. Ganacsade ahaan laguma dhashee waa la noqdaa, hadaba halkaan waxaan ku eegayaa 5 qodob oo lagu gaadhi karo guul ganacsi.
Rabitaan – Qofka ganacsadaha wanaagsan ah waxaa lagu yaqaanaa in uu marka horeba leeyahay rabitaan weyn oo ku aadan fikradiisa. Waa qof jecel waxa uu sameynayo isla markaana doonaya in uu ka miro dhaliyo.
Aragti dheer– Qofka ganacsadaha wanaagsan ah waxa uu leeyahay aragti dheer oo ku wajahan ganacsigiisa iyo sida uu ku guul gaari karo. Indho la’aan laguma bilaabo ganacsi. Qofku waa in uu leeyahay aragti qeexan oo muujineysa waxyaabaha uu sameynayo iyo sida uu u sameynayo.
Wax qabad – Qofka ganacsadaha wanaagsan ah waxa uu sameeyaa wax qabad degdeg ah, hadal iyi fikrad keliya meel laguma gaaro ee waxaa lagu guul gaaraa in aad ka miro dhaliso fikradaada oo aad ficil u badasho.
Go’aan – Waa waxa ugu muhiimsan ee lagu yaqaano ganacsadaha wanaagsan, qofka isla markiiba isdhiiba marka caqabad ka hor timaado ma ahan ganacsade wanaagsan. Qofka hawl karka ah waxaa lagu yaqaanaa in uu leeyahy go’aan joogto ah oo uusan ka niyad jabin fikradiisa ilaa uu ka miro dhaliyo.
Waqtiga – Qofka ganacsadaha wanaagsan ah waxa uu yaqaanaa waqtiga ugu wanaagsan ee hawl la sameeyo. Waxa uu ka faaideystaa daqiiqad kasta oo waqtigiisa ah.